MAHAFATY NY DIDY FOLO - Dinika forum.serasera.org
MAHAFATY NY DIDY FOLO
Fitohizan'ny hafatra : Izany an! Hoy ny soratra masina hoe : « Ary And...
Pejy: Voalohany < 6 7 8 9 >
RBNIR - 01/06/2017 11:02
Hoy ny soratra masina hoe : « Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany Apostoly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana*, dia fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samy hafa tsy fantatra. [* Gr. hery] » (1 Korintiana 12:28)
voalohany hoy ny Soratra Masina ny Apostoly, (ary tsy hita tabilao eo mihitsy ny episkopo an!)
fa inona ny episkopo araka ny Soratra Masina ihany???
« Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny Fanahy Masina anareo ho mpitandrina*, hiandrasanareo ny fiangonan**'Andriamanitra***, izay novidiny tamin'ny ràny. [*Gr. episkopo] [** Gr. eklesia'] [*** Na: [ny fiangonan'ny Tompo] » (Asan'ny Apostoly 20:28)
« [Fitarihan-teny sy fiarahabana ary fisaorana] Paoly sy Timoty, mpanompon'i Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy mbamin'ny mpitandrina* sy ny diakona izay any Filipy; [* Gr. episkopo] » (Filipiana 1:1)
« Koa ny mpitandrina* dia tsy maintsy ho tsy manan-tsiny, manam-bady tokana, mahonon-tena, hendry, tia filaminana, mampiantrano vahiny, mahay mampianatra, [* Gr. episkopo] » (1 Timoty 3:2)
« Fa efa nania toy ny ondry ianareo (Isa. 53.6), nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny Mpiandry sy Mpitandrina* ny fanahinareo.[* Gr. Episkopo] » (1 Petera 2:25)
Mpitandrina hoy ny soratra masina (pasteur no fandikako azy ankehitriny) (natao hisahana fiangonana iray na faritra iray fa tsy ny fiangonana iray manontolo toy ny apostoly.....
Ka ny ahy moa RA TAN dia izay voasoratra ihany (tsy anampiana tsy analana) ka dia io eo ny episkopo dia tsy hita tabilao ary ny Apostoly no voalohany hoy ny Soratra Masina fa tsy izao an!
P.S : izaho koa dia efa nolazain'i Jesosy hoe zandriny !!!!
RBNIR - 01/06/2017 11:41
Fa ny mpitondra fivavahana any aminareo mpanaradia ny a/try ny grika anefa misy milaza ny tenany ho apostoly; ary tsy iray fa bdb a!
Dia ahoana koa ianao @ ireny?
« Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na aviavy amin'ny songosongo? » (Matio 7:16)
Ny olona manan-tsaina tsy maintsy hahay hanavaka tsara ny voaloboka amin'ny tsilo, ny aviavy amin'ny songosongo RA TAN.....
RA TAN - 01/06/2017 12:04
Ny olona manan-tsaina tsy maintsy hahay hanavaka tsara ny voaloboka amin'ny tsilo, ny aviavy amin'ny songosongo RA TAN..
Ka ilay a/trareo iray ihany: samy mivavaka @ ZEUS/JESOSY sampin'ny grika ianareo.
Ny "voany"? = samy MPANOTA ianareo mpanompon'i zeus; na ilay apostoly sandoka na ianao.
Iray ihany ianareo @ fanoherana an'i YAHOSHUAH, fa mody mifanipaka ankarona fotsiny.
Dia iza aminareo no voaloboka sandoka, ary iza aminareo no tsilo sy aviavy sy songosongo?
RBNIR - 02/06/2017 08:57
Ny fahafantarana ilay Anarana hoy aho tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra iny....
« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)
Mitovy amin'ny manao Tompoko Tompoko ihany ny olona mahafantatra ilay Anarana nefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra....
Ilay "fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy Aminy no zava-dehibe"....
Manamafy izany ity teny ity.....
« Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy; dia nankeo amin'ny lahimatoa izy ka nanao hoe: Anaka, andeha miasa any amin'ny tanim-boaloboko anio. » (Matio 21:28)
« Fa namaly izy ka nanao hoe: Tsy handeha aho; nefa nony afaka izany, dia nanenina izy ka nandeha ihany. » (Matio 21:29)
« Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe: Handeha aho, tompoko; kanjo tsy nandeha izy. » (Matio 21:30)
« Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon'ny rainy? Hoy izy: Ny lahimatoa. Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. » (Matio 21:31)
Ireo mpirahalahy ireo dia samy nahafantatra tsara ny Anaran'Ilay Rainy (saingy izay manao ihany no ankahasitrahana).....
Inona moa no sitrapon'Andriamanitra???
Nampahafantariny tamin'ny alalan'ireo didy sy lalàna fahiny...
Ohatra : Aza mijangajana .....Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tsy hijangajangan'ny olona...
Aza mangalatra : Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tsy hangalaran'ny olona....
happpy - 03/06/2017 15:12
Slt daoly nareo e.
Amiko alo de tsitako ze ho kianina @ le zavatra teneninareo RATAN sy MINDAOZY, marina io torinareo io matoa tsisy mahatohitra. Henoko tao @ radionareo fa we: efa haorina ny tempolin'ny jerosalema amin'izao, araka ny efa notenenin'ny mpampianatra anareo tamin'ny 2003. Ary ny fitsanganan'io tempoly io hoy izy no lakolosy farany milaza fa tonga ny farany. Fa henoko tao @ rfi koa alo ilay vaovao milaza ny fananganana an'ilay tempoly t@ talata teo.
Misy soratra masina nefa miteny we: torina manerana an'izao tntl zao ny filazantsara vao tonga ny farany. Nareo nefa zao vao eto m/car ihany. De @ fomba ahoana no ahavitanareo mitory an'io manerantany?
RBNIR - 04/06/2017 07:26
.... marina io torinareo io matoa tsisy mahatohitra......
Itony koa v izany izao marina satria tsy nisy nahatohitra (sady voalohany mihitsy ) nandritra ny taonjato maro?????
MINDAOZY - 08/06/2017 14:12
Ilay fampianarany tsy voatohitrao dia izany sisa no kianinao.
=> Ny dikan'ny EPISCOPE dia "A/tra mijery avy any ambony"
Raha ny ambasadaoran'i Yahoshuah no tinao ho tenenina hoe tsy hita tabilao dia ireto no teny milaza Azy ao @ baiboly:
MINDAOZY - 08/06/2017 14:20
De @ fomba ahoana no ahavitanareo mitory an'io manerantany?
Ka ilay izy aza efa tonga manerantany t@ fotoana tsy nampoizina ko. Jereo ny www.rtvyahoshuah.com fa efa mahita izao tntl zao
stahtam - 08/06/2017 15:04
Ho an'i MINDAOZY: Satria mahita revin-gadra mipoitra indray dia avy @ fanaovana azy isika:
1°) "EPI=Ambony, SCOPE=Fijerena => Ny dikan'ny EPISCOPE dia "A/tra mijery avy any ambony"
Ho an'ny hafa firenena dia ny grika no nanoratra tantaram-pivavahana ho azy ireo ka ekeny sy inoany. Tsy gaga isika raha teny grika no ipoiran'ny titre entin'ny mpitondra fivavahana ao aminy.
2°) Ny Isaia 42 kosa dia Israeliana no resahina ao fa tsy hafa firenena. Natao ho an'ny Israeliana ny faminaniana sy ny tenin'Ilay Nahary ary ny fiandraiketana azy. Ka raha mpitondra fivavahana notefen'ny hafa firenena (episcopo, evanjelistra, pasteur...) dia ny hafa firenena sy izay mivavaka @ izay ivavahan'izy ireo (Andriamanitra, God, Dieu...) ihany no mihaino sy manaraka izany.
Izany hoe tsy naminany episcopo izany velively i Isaia fa fisandohana sy fisavitsavihana ataon'ny any ivelany no misy raha sendra mitranga ny tahaka izany. Ny grika dia firenena efa elabe taty aorian'i Isaia vao niforona ka tsy fiteny vao hoforonina (episcopo) no hampiasainy
3°) Raha adika @ teny grika ny teny hoe: anjely (voalaza ao @ Apok 14/6) dia tsy manome hoe: episcopo velively fa ny NANDRA aloha dia afaka manaiky sy manamarina izany ihany e!
RBNIR - 09/06/2017 12:26
Ahoana ary ity mitsipaka baiboly ity ry MINDAOZY A!!!
Izao lasa mpampianatra DISO...
Efa mazava B ireo episkopo = mpitandrina (ny mpitandrina dia tsy ambony fa eo ambany fiadidian'ny apostoly raha araka ny baiboly izay tsy anampiana sy analana)
Savihanareo daholo ny Asa voalaza fa ho andraiketin'ny apostoly (lasa mpisandoka andraikitra ihany koa)
Ny ho mpanantanteraka ny apok.14:6-12 dia ireo apostoly vaovao hofidin'Ilay Zanak'Andriamanitra fa tsy episkopo izany e!!!
MINDAOZY - 12/06/2017 12:53
Tsy gaga isika raha teny grika no ipoiran'ny titre entin'ny mpitondra fivavahana ao aminy.
Ny Isaia 42 kosa dia Israeliana no resahina ao fa tsy hafa firenena. Natao ho an'ny Israeliana ny faminaniana sy ny tenin'Ilay Nahary ary ny fiandraiketana azy.
Izany hoe tsy naminany episcopo izany velively i Isaia
Fa iza no niteny taminao hoe ny teny grika dia teny ratsy?
Ny teny grika dia teny tahaka ny teny rehetra ihany. Ko maninona koa ary ianao raha tsy miteny gasy ref zany no mb toe-tsainao?
Tonga dia ataovy teny hebreo ranoray ary ny teninao eto fa aza asiana teny gasy, fa hovaliko teny gasy ranoray ny anao.
Fa gaga aho nefa fa ianao aza mampiasa teny gasy hoe "ISAIA"; ary lazainao fa tsy faminaniana hoan'ny hafa firenena ilay "ISAIA 42", nefa ny voalaza dia eo @ andininy 1 sy 4 fa hoe hamoaka fitsipika hoan'ny JENTILISA Izy. Ka inona indray ary aminao io jentilisa tenenina io.
Fialonana ny anareo jiosy gasy.
stahtam - 12/06/2017 15:27
Ny olona voatsindrona @ marina no mimenomenona toa ny sinoa very entana tahaka izao ataonao izao. Zavatra tsy nisy niteny akory no mampilelalela anao eto. Aleo fa hataontsika @ fanaovana azy indray e:
1°) Fa iza no niteny taminao hoe ny teny grika dia teny ratsy?
Tsy ratsy ny teny grika MINDAOZY a. "Ny teny grika dia teny tahaka ny teny rehetra ihany" araka ny voalazanao. Fa fivavahana no resaka eto, manatsinkafona ny mpandainga isika eto, ka ambara aminao fa ny mpitondra fivavahana manana titre noforonina avy @ teny grika (epi=... scope=...) dia fivavahana tsy an'Ilay nivavahan'i Israel fa an'ny firenen-kafa, any ivelany izy izany raha lazaina @ teny tsotra. Ny grika angamba no naniraka azy fa tsy Ilay Mesia Israeliana.
2°) "Ko maninona koa ary ianao raha tsy miteny gasy ref zany no mb toe-tsainao?"
Ka satria izaho tsy mpitondra fivavahana Israeliana.
3°) "Tonga dia ataovy teny hebreo ranoray ary ny teninao eto fa aza asiana teny gasy, fa hovaliko teny gasy ranoray ny anao"
Hay ianao koa tsy mahay teny hebreo tahaka ny mpampianatra anao ihany? Dia tohizo ihany àry ny tahilim sy ny halaloiah sy ny shamôt fa mba mampivanitika e!
4°) Fa gaga aho nefa fa ianao aza mampiasa teny gasy hoe "ISAIA";
Ka fantatro tsinona fa tsy mahay (teny hebreo) ianao miresaka amiko ka atao ahoana àry? Io aza baiboly teny gasy efa mampifatotra anareo ka mainka fa teny hebreo? Raha mba averiko aminao izao ilay fanontaniako tany aloha hoe: tena teny hebreo marina (araka ny nolazainareo) ve ny hoe HAVAH, ary tena hoe MPAMORONA tokoa ve no dikany @ teny gasy, dia mba hanan-kavaly ve ianao? (Miteniteny fahatany !)
5°) "ary lazainao fa tsy faminaniana hoan'ny hafa firenena ilay "ISAIA 42", nefa ny voalaza dia eo @ andininy 1 sy 4 fa hoe hamoaka fitsipika hoan'ny JENTILISA Izy. Ka inona indray ary aminao io jentilisa tenenina io"
Ataontsika mazava tsara àry fa toa mirefarefa loatra ilay ady hevitra:
a- Mbola tsy voavalina(re)o aloha, ilay fanontaniana momba io andininy, adikanareo vilana io. Toa izao ilay fanontaniana: misy dikan-teny TELO io Isaia 42/1 io: RARINY (Matio 12)/FITSIPIKA (Isaia 42)/JUGEMENT (dikan-teny frantsay); ka rariny ve=fitsipika= jugement?
b- Rehefa hitanao izay tena voambolana tokony ho eo dia mety hisokatra ihany angamba ny sainao (efa donton'ny lavage de betro). Ny jentilisa, eto, dia MIANDRY fa tsy mipingapinga mizara (tahaka ny ataon'ilay ambasadaoron'i Jesosy t@ 1996-2008). Israeliana no nomena adidy hizara fa tsy izao jentilisa sabora vava rehetra izao.
Mahagaga ahy mihitsy ! hoe tena donto ve sa minia jamba ireto olona ireto fa na i Paoly apostolin-dry zareo aza mba mahasahy miteny hoe tsy adidin'ny jentilisa ny teny (Romana 3/1,2) fa dia eeeeeeh... andao ihany na ho any na tsy ho any e!
6°) "Fialonana ny anareo jiosy gasy"
Tena sûr ve ianao fa jiosy gasy aho? Mba ataovy matotra ny valin-teny !
RA TAN - 15/06/2017 09:25
… fa ny mpitondra fivavahana manana titre noforonina avy @ teny grika (epi=… scope=…) dia fivavahana tsy an’ilay ivavahan’i Israel fa an’ny firenen-kafa, any ivelany izy izany raha lazaina @ teny tsotra. Ny grika angamba no naniraka azy fa tsy Ilay Mesia Israeliana.
IZA ilay anaran’ilay ivavahan’Israeliana? Tokony hitonona Anarana ianao izao teo, fa TSY SAHY satria tsy mahafantatra. Fa lao itenenako Azy rehefa tsy sahy: YAH no anaran’ilay nivavahan-dry Abraham sy Isaak sy Yakob sy ny Israeliana fahiny, fa ny Israeliana ankehitriny tsy mivavaka aminy intsony nohon’ny adalany, dia lasa fahavalony(ROM,11:28). Dia io nanatona ny firenena hafa io ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny ka maniraka ny zandrin’i Yahoshuah SAMUELSON EDWARD; YAHOSHUAH ilay Mesia Israeliana mihintsy no maniraka Azy dia haninn enao?
Tena aty @ firenena hafa indray izao ilay YAH nivavahan’Israeliana fahiny no miseho; ary Gasy no asainy mitondra ny teniny mba ahatanteraka ny ISAIA,28:11 sy ny 1KOR,14:21. Fa ny Israeliana efa nilaozany; porofon’izany nataon’i Hitler fay (6000000 no jiosy matiny), ary tsy afa-bela mandrak’izao ny Israeliana dia io mitaintaina ataon’ny arabo fay io mandrak’izao.
Hay ianao koa tsy mahay teny hebreo tahaka ny Mpampianatra anao ihany? Dia tohizo ihany ary ny tahilim sy ny halaloiah sy ny shamôt fa …
…Ka fantaro tsinona fa tsy mahay (teny hebreo) ianao miresaka amiko ka atao Ahoana ary? Io aza teny gasy efa mampifatotra anareo ka mainka fa teny hebreo?
Mbola tsy ampy izany fanambaniana ataonao izany; mbola tsy voateninao ilay hoe ADALA izahay mpanaradia an’i YAHOSHUAH, fa ianareo kosa tapi-pahaizana (dia tsy mahay ninoninona intsony).
Fa izahay izay ataonareo ho adala sy vendrana no nofidin’A/tra mba hampamenatra anareo (1KOR,1:27). Aty @ ilay heverinareo ho tsinontsinona A/tra no miasa mba hanehoany ny voninahiny, fa tsy any @ nareo izay milaza fa tapi-pahaizana tahaka ny anjely nivadika akory.
Aiza ny fahendrenareo ry izao tontolo izao a? Aiza ny fahalalana amboninareo ry izao tontolo izao a? Aiza ny fahaizanao teny hebreo ry stahtam a?
Fa mihatra koa izao ilay tenin’ilay Dadanay hoe: “ISAIA,29:14 … ka ho foana ny fahendren’ny olon-kendriny, ary tsy ho hita ny fahalalan’ny mazava sainany”
Teneno eto anie ny anaran’izany mba ivavahanao izany e; ataovy @ teny hebreo izay heverinao fa ambony mihintsy.
Fa ho tsaraiko eto a!
Eto imasonao mihintsy no hanapotehanay ny fahalalana ambony anananareo tapi-pahaizana. Mba ho fantatrao koa fa: “2KOR,10:5 fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an’Andriamanitra izahay …”
Mbola tsy voavalina(re)o aloha ilay fanontaniana momba io andininy adikanareo vilana io. Toa izao ilay fanontaniana: misy dikan-teny TELO io Isaia42/1 io: RARINY (Matio12)/FITSIPIKA (Isaia42)/JUGEMENT (dikan-teny frantsay); ka rariny ve=fitsipika=jugement?
Ny jentilisa eto dia MIANDRY fa tsy mipingapinga mizara (tahaka ny ataon’ilay ambasadaoran’ilay jesosy t@ 1996-2008).
Ny Israeliana no Nomena adidy hizara fa tsy izao jentilisa sabora vava rehetra izao. … fa na i Paoly apostolin-dry zareo aza mba mahasahy miteny hoe tsy adidin’ny jentilisa ny teny (Romana3/1,2) fa dia eeeeeeeh…
Mitonia tsara aloha fa tapaka lalan-drà eo a!
-Tena efa voavaly io, fa tsy maninona averiko eto koa ny valiny satria averinao ilay fanontaniana:
Ndana henoy ny HFF RADIO, fa mamoaka ny RARINY ny Zandrin’i Yahoshuah sady mamoaka FITSIPIKA, ary JUGEMENT izany.
Raha ny mahita ny Ambasadaoran’i Yahoshuah Gasy mamoaka an’ilay Fitsipka hoan’ny jentilisa izay mitsara anao no maha be fialonana anao tahak’io dia vao mainka ataoko @ tena avo lenta kokoa: Avy any Andanitra ao @ Yahoshuah i SAMUELSON EDWARD dia Izy no Nomena ny fahefana hamoaka ny fitsipka hoan’ny Jentilisa; fa izany Israeliana izany mbola ety antany ihany izany (any ivelan’ny fanjakan’i Yahoshuah izany). Ianao aza anie efa nanontaniako hoe Iza ary io mamoaka fitsipika hoan’ny Jentilisa voalaza eo @ ISAIA,42:1-6 io? Fa tsy mahasahy mitonoa Anarana ianao.
-Raha mbola tsy tonga i YAHOSHUAH dia tena adidin’ny Jiosy tokoa ny tenin’A/tra. Fa ra vao tonga i YAHOSHUAH dia efa nampitandrina Izy hoe ra vao mamono olona ianareo dia devoly (JAONA,8:37-44), fa tena namono olona ny Jiosy; ary ny tena zava-doza i YAHOSHUAH mihintsy no novonoiny. Nanomboka te odia FAHAVALON’A/TRA ny jiosy (ROM,11:28). Ka A/tra ve amina odia hampitondra ny teniny @ fahavalony?
stahtam - 15/06/2017 11:04
1°) IZA ilay anaran’ilay ivavahan’Israeliana? Tokony hitonona Anarana ianao izao teo, fa TSY SAHY satria tsy mahafantatra. Fa lao itenenako Azy rehefa tsy sahy: YAH no anaran’ilay nivavahan-dry Abraham sy Isaak sy Yakob sy ny Israeliana fahiny, fa ny Israeliana ankehitriny tsy mivavaka aminy intsony nohon’ny adalany, dia lasa fahavalony(ROM,11:28)
Valiny: Samy hafa ny ivavahantsika. Saro-piaro @ anarany Ilay ivavahan'ny Israeliana, ka ahoana moa no hilazako aminao ny anaran'Izay ivavahako? Ianao no te-hipingapinga hamoaka ny anao teto, ka rehefa voaporofo fa diso vao hoe: "mba avoahy koa ny anao ry stahtam?" Ny lainga vitanao arenina raha mba "te-hampahamenatra ny hendry" araka ny teninao ianao. Ohatra: Havah ve = mpamorona? anarany mantsy io hoy ianao. Fa raha tsy voavalinao io dia hoy aho hoe: Ny mpandainga ve no mba hampahamenatra ny hendry? Efa hivadika ny gilaoby e!
2°) Dia io nanatona ny firenena hafa io ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny ka maniraka ny zandrin’i Yahoshuah SAMUELSON EDWARD; YAHOSHUAH ilay Mesia Israeliana mihintsy no maniraka Azy dia haninn enao?
Io Yahoshuah maniraka azy io izany ilay nahary ny lanitra sy ny tany (hoy Herilanto777)
"ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny" nolazainao io anefa no nahary ny lanitra sy ny tany aminay. Noho izany, mpisando-pahefana izany io Yahoshuah io. Mpisandoka izany no naniraka an'i episcopo. Dia haninn enao?
3°) Tena aty @ firenena hafa indray izao ilay YAH nivavahan’Israeliana fahiny no miseho; ary Gasy no asainy mitondra ny teniny mba ahatanteraka ny ISAIA,28:11 sy ny 1KOR,14:21
Valiny: Raha ny Isaia dia olona mamon-divay no resahina eo (fiteny miambatrambatra...) fa raha ny fahitako ilay I Kor 14/21 kosa dia FITENY TSY FANTATRA no resahiny eo. Ka asa, iza @ ireo toerana ireo no misy an'i episcopo? (Inona koa moa no ipendipendenao mi-interpréter ny Isaia izay tsy nomena anao akory e?) mdr
4°) Fa ny Israeliana efa nilaozany; porofon’izany nataon’i Hitler fay (6000000 no jiosy matiny), ary tsy afa-bela mandrak’izao ny Israeliana dia io mitaintaina ataon’ny arabo fay io mandrak’izao.
Valiny: averiko ihany (tsy mahavizaka) fa tsy nomena anareo ny teny, ka izay no mahatonga io fitenitenenam-poana zavatra tsy fantatra tahaka ny .... io.
T@ 1942 dia 3 200 000 no Jiosy tany Eoropa ka gaga aho fa nahafaty Jiosy 6 000 000 i Hitler. (Ny olona mihambo tsy tia boky ihany no tsy maintsy mino lainga toa izao, sady ianareo koa moa efa mpandainga rahateo ka tafahaona izany ny tia sy ny manina)
Izao anefa :talohan'io daty io dia efa betsaka ny Jiosy novonoina teto ambonin'ny tany satria ahoana moa no hakanareo (kristiana) ny toerany raha tsy haratsiana sy aripaka izy? Soa ihany fa ao ny faminaniana hahalalana ny marina: Jeremia 31/37
5°) Mbola tsy ampy izany fanambaniana ataonao izany; mbola tsy voateninao ilay hoe ADALA izahay mpanaradia an’i YAHOSHUAH:
Tsy hoe ADALA fa aza misora-tena. MPANDAINGA no tena marina, ka raha ny mpandainga no hananatra sy hampahamenatra ny hendrydia anaro eo izany izay ho azonareo @ izany e! Ny ahy kosa dia tsoatra : Aleo mifanena @ ... toa izay mifanena @ mpandainga.
6°) Teneno eto anie ny anaran’izany mba ivavahanao izany e; ataovy @ teny hebreo izay heverinao fa ambony mihintsy. Fa ho tsaraiko eto a!
Valiny: Ka elohym @ teny hebreo aza tsy hainao mamaky ka inona no mba ihamboanao ho fantarina sy hotsaraina eo?
7°) Tena efa voavaly io, fa tsy maninona averiko eto koa ny valiny satria averinao ilay fanontaniana:
Ndana henoy ny HFF RADIO, fa mamoaka ny RARINY ny Zandrin’i Yahoshuah sady mamoaka FITSIPIKA, ary JUGEMENT izany
Valiny: égalité no anontaniana fa tsy fampiadiana mason-daomy tahaka izany.
8°) Raha ny mahita ny Ambasadaoran’i Yahoshuah Gasy mamoaka an’ilay Fitsipka hoan’ny jentilisa izay mitsara anao no maha be fialonana anao tahak’io dia vao mainka ataoko @ tena avo lenta kokoa:
Valiny: Lainga avo lenta angamba no tianao holazaina hoe avoakany fa tsy fitsipika. Inona no hialonako mpandainga?
9°) Avy any Andanitra ao @ Yahoshuah i SAMUELSON EDWARD dia Izy no Nomena ny fahefana hamoaka ny fitsipka hoan’ny Jentilisa;
Valiny: Koa nahoana no mandainga sy mitory lainga?
10°) "fa izany Israeliana izany mbola ety antany ihany izany (any ivelan’ny fanjakan’i Yahoshuah izany)"
Marina io. Fanjakana roa samy hafa no misy ny Israeliana sy ny tarik'i Yahoshuah. Samy hafa koa ny lalany
11°) Ianao aza anie efa nanontaniako hoe Iza ary io mamoaka fitsipika hoan’ny Jentilisa voalaza eo @ ISAIA,42:1-6 io? Fa tsy mahasahy mitonoa Anarana ianao.
Valiny: ny eo ihany no averimberina
12°) Raha mbola tsy tonga i YAHOSHUAH dia tena adidin’ny Jiosy tokoa ny tenin’A/tra. Fa ra vao tonga i YAHOSHUAH dia efa nampitandrina Izy hoe ra vao mamono olona ianareo dia devoly (JAONA,8:37-44), fa tena namono olona ny Jiosy; ary ny tena zava-doza i YAHOSHUAH mihintsy no novonoiny
Valiny: Hatao lohahevitra iray mitokana mihitsy io raha sahy ianao
13°) Nanomboka te odia FAHAVALON’A/TRA ny jiosy (ROM,11:28). Ka A/tra ve amina odia hampitondra ny teniny @ fahavalony?
Ka naninona izy no nampitondra ny teniny t@ Apostoly? (Israeliana avokoa ireo) Sa i Samuelson Edward koa mba apostoly? Ary maninona no odian-tsy hita ny andininy 26 ? Tora-po ny anao ka tsy mahataitra intsony.
stahtam - 16/06/2017 08:16
Ô RA TAN a!
Misy hadino kely , satria tokony hovaliana avokoa izay resaka ataonao dia hovaliako fohifohy ihany ity iray ity mandra-piandry izay tena fahasahianao na hatokana ho lohahevitra iray mahaleo tena mihitsy izy ity na hajanona:
"Raha mbola tsy tonga i YAHOSHUAH dia tena adidin’ny Jiosy tokoa ny tenin’A/tra. Fa ra vao tonga i YAHOSHUAH dia efa nampitandrina Izy hoe ra vao mamono olona ianareo dia devoly (JAONA,8:37-44), fa tena namono olona ny Jiosy; ary ny tena zava-doza i YAHOSHUAH mihintsy no novonoiny"
1°) Vanim-potoana izany no resahinao eto. Vanim-potoana namonoan'ny Jiosy an'i Yahoshuah (ilay nahary ny lanitra sy ny tany). Raha faritana ankapobeny dia tokotokony ho tany @ taona + 33 tany ho any izany (sa hoe angano izany?).
2°) Atao hoe novonoin'ny Jiosy izany i Yahoshuah (ilay nahary ny lanitra sy ny tany) t@ taona (+ 33). Vanim-potoana "nampitsimbadika ny rasa"
3°) Taty aoriana be anefa i Paoly (mbola nanenjika aloha, izay vao nilaza fa nahita an'i Yahoshuah, izay vao nisora-tena ho Apostoly, izay vao nanendry tena ho mpitory, izay vao nanoratra ny epistilin'ny Romana - vinavinaina hoe 5-10 taona eo ho eo), dia mbola nilaza fa natokana ho an'ny Jiosy ny fitoriana filazantsara . Dia nanomboka oviana marina ilay hoe : "Nanomboka te odia FAHAVALON’A/TRA ny jiosy"? Teo @ taona +33 (namonoana azy) sa taty @ Romana 11/28 (environ entre + 38 et + 43) ary ny tena mampihomehy: IZY MITORY @ io MBOLA JIOSY.
4°) Ka A/tra ve amina odia hampitondra ny teniny @ fahavalony?
Ka ilay Paoly-nareo mihitsy izany no tokony hametrahanao io fanontaniana io e! Izy mantsy no nanoratra ny Romana 11 fa ny olana, tsindrotsindrohinareo izay mampety anareo dia ianareo ihany no mamatotra anareo. Nodianareo tsy vakiana ny andininy 1 (tahaka ny nanaovanareo ny Matio 23 ihany) satria tsy mety aminareo. Ny andininy faha-4 moa dia tena nalevina im-pito mandifotra olona. Dia io misarangodrangotra tsy misy fotony tahaka io sisa no iafarany.
RA TAN - 16/06/2017 10:02
Averiko ireto tenin'i stahtam jiosy gasy mpitsipaka baiboly ireto, ary jereo tsara izay ataoko menamena.
Hiteny an'ilay anaran'izay ivavahanao ianao TRATRAKO, tsy hiteny ianao TRATRAKO ihany. Eto ianao dia nilaza mazava fa "YAH izay nivavahan'ny Israeliana fahiny no nahary ny lanitra sy ny tany": ilay ivavahanay ankehitriny izany. Fa ny ananaran'izay ivavahanao dia mbola tsy tononinao. Izany hoe tsy io YAH nahary ny lanitra sy ny tany io no ivavahanao fa hafa; ko inona fa DEVOLY anie izany ilay ivavahanao e! Tena tsy mahagaga raha mitsipaka baiboly
RA TAN - 16/06/2017 10:24
Niaiky i stahtam jiosy gasy mpitsipaka ny testameta vaovao sy ny baiboly rehetra fa ny Andriamanitr'i Samuelson edward "YAH" no nahary ny lanitra sy ny tany. Fa izy tsy sahy nanonona ny anaran'izay ivavahany.
stahtam: 15/06/2017 11:04
Samy hafa ny ivavahantsika. Saro-piaro @ anarany Ilay ivavahan'ny Israeliana, ka ahoana moa no hilazako aminao ny anaran'Izay ivavahako?
"ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny" nolazainao io anefa no nahary ny lanitra sy ny tany aminay.
Mazava izany fa: Tsy mivavaka @ io YAH izay A/tr'i Samuelson Edward sady A/try ny Israeliana fahiny io, izay nahary ny lanitra sy ny tany i stahtam.
Miharihary ny maha DEVOLY an'ilay ivavahan'i stahtam; satria manohitra an'io YAH mpamorona ny lanitra sy ny tany io, dia jereo tokoa ny ataony fa mitsipaka baiboly
stahtam - 16/06/2017 12:53
Efa lasa any, vao haingana teo, ny valiny RA TAN a!
Toa fanamarihana mitovitovy mantsy no nalefanao dia nataoko valiny mitambatra fa ity iray teo amboniny ity no hovaliako mitokana:
1°) "Averiko ireto tenin'i stahtam jiosy gasy mpitsipaka baiboly ireto, ary jereo tsara izay ataoko menamena"
- Na holokoinao mena io na gris clair na fotsy, na holokoinao hatr@ écran aza hitako foana io fa aza matahotra e! ary VALIAKO foana koa! OK?
2°) Hiteny an'ilay anaran'izay ivavahanao ianao TRATRAKO, tsy hiteny ianao TRATRAKO ihany. Efa any ny valiny dia tsakotsakoy tsara. Any no ahitana hoe inona no tratranao!
RA TAN - 19/06/2017 12:06
Ary efa t@ herintaona koa aho no niteny t@ stahtam hoe “YAH” no anaran’Ilay nahary ny zava-drehetra (tary @ publication nataon’i Rafieritreretana). YAH hoy aho no anarany, fa tsy izany ELOHYM izany; fa zavatra tsy misy dikany izany ELOHYM izany. Ny hoe ELOHYM, ANDRIAMANITRA, DIEU, GOD, … dia titre fotsiny fa tsy anarany.
Dia namaly i stahtam 10/11/2016 10:04 hoe:“na inona na inona Anarana apetrakao eo dia fahavalon’i Elohym satria ny hoe Elohym dia nolazainao fa tsy misy dikany”.
Izany hoe araka io tenin’i stahtam t@ herintaona io dia efa niteny izy fa “fahavalon’ilay ELOHYM ivavahany ilay YAH nahary ny lanitra sy ny tany nolazaiko”.
Fa gaga anefa aho fa heritaona aty aoriana indray i stahtam dia miaiky fa, YAH izay efa nolazainy fa fahavalon’ilay ELOHYM ivavahany no nahary ny lanitra sy ny tany; izany hoe ilay ELOHYM ivavahan’i stahtam tsy nahary ny lanitra sy ny tany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa maninona raha vao niteny an’io Anarana marina YAH io ny ambasadaoran’i Yahoshuah t@ 2009 dia tonga dia niaiky ny fahamarinany ianao; ary maninona raha vao niteny an’io Anarana YAH io koa aho t@ herintaona dia maninona koa ianao raha niaiky avy hatrany? Fa maninona ianao no herintaona aty aoriana vao miaiky?
Ary rehefa niaiky ianao fa marina ny anay(YAH) dia diso izany ny anao mazava ho azy, ka aza miseho be vava intsony.
stahtam - 19/06/2017 14:21
Asa raha efa mazavazava aminao ihany ilay valiny ary ambadika ary fa ampiako kely eto:
"Fa gaga anefa aho fa heritaona aty aoriana indray i stahtam dia miaiky fa, YAH izay efa nolazainy fa fahavalon’ilay ELOHYM ivavahany no nahary ny lanitra sy ny tany; izany hoe ilay ELOHYM ivavahan’i stahtam tsy nahary ny lanitra sy ny tany."
VALINY: YAH sy ELOHYM dia anarana MIARAKA voasoratra ao anaty baiboly hebreo hatry ny elabe (hatr@ andron-dry Davida sy ny hafa...). YAH izany dia anarana TSY APETRAKAO fa efa NIPETRAKA tao hatry ny ela. Ny Yahavah sy ny Yahoshuah no napetrakao TATY AORIANA dia ireny no fahavalony, fa raha izay fisavihanao ny Yah tsy mandeha aty aminay e!
Page rendered in 0.0320 seconds